mbanye Berget | 7773033.ru - 7773033.ru
Nice ezumike ụlọ ezi ụkpụrụ na-emi odude 50 m Holmsjön na bath- na angling. Large ndịda-eche ihu jakị. utsikt över sjön och skogen har du in på knutarna. Large ọtụtụ ahihia ntekwasa ebupụta, iri eghu, ubi ngwá ụlọ. nwa enyi na enyi! Ịkwọ ụgbọ epeepe ụgbọ mmiri dị gbaziri. Anụ Mmịkpọ ụlọ ọrụ na-ala na Holmsjön. E nwere ezi ihe mkpuchi na GSM na 3G netwọk. ọ bụ ike ka na-atụ mail na akwụkwọ akụkọ n'oge ezumike izu.
Mmadụ Bịa ka anyị okpomọkụ idyll! a obere hideaway na-amasị anyị na-eso gị a izu ole na ole kwa afọ. n'oge mgbụsị akwụkwọ,ịchụ nta oge! Rent a ụlọ n'oge munsu ịchụ nta oge ma ọ bụ ihe karịrị izu ụka ichu nta bekee. Ụfọdụ nhọrọ bụ na-dịnụ na-eme ndokwa achụ nta ala ogologo na mkpumkpu oge.
nọmba nke akwa: 5
Ibi Area: 60 m²
nọmba nke ụlọ: 3
price: 2000/ izu
kọntaktị: Hakan Staaf 070-312 32 91, 0692-500 48
9/2: N'oge ehihie na Saturday pụrụ d ...